တူမောင်ညို – VOA မှ တဆင့် သူတို့ လိမ်ညာနေကြပြီ | MoeMaKa Burmese News & Media
တူမောင်ညို – VOA မှ တဆင့် သူတို့ လိမ်ညာနေကြပြီ
(မိုးမခ) ၂၅၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄
“မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒီ၊ လေလှိုင်းသံလူသတ်သမား၊ VOA လိမ်နေသည်” — စသဖြင့် တစ်ချိန်က အသံကုန်ဟစ်ခဲ့ကြ သူများသည် ယခုအခါ VOA မှ တဆင့် စကားပြောနေကြလေပြီ၊ ထုတ်လွှင့်နေကြလေပြီ။
ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ မင်္ဂလာယူပြီးပြော၊ ပြောနေသည့် “အပြောင်းအလဲ”နှင့် “ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး” ဆိုသည်မှာ တချိန်က “မုသာဝါဒီ များ၊ လိမ်ညာနေသူများ” ဟု သူတို့ အော်ဟစ်ဆဲဆိုခဲ့ကြသူများနှင့် သူတို့တတွေ ပြန်လည်အလွမ်းသင့်နေကြပြီ၊ ပြန်ပေါင်းထုတ်ကြပြီဆို သည့်အချက်ကို ရည်ညွန်းပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်မည်ဟုယူဆပါသည်။
VOA မှ တဆင့် သူတို့ ဘာတွေ လိမ်ညာခဲ့ကြသလဲ။
သူတို့ပြောသည့်သဘောအနှစ်ချုပ်က “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ” သည် သူတို့၏ အသက်၊ “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး” ဆိုသည်မှာ သူတို့စီစဉ်ညွန်ကြားချုပ်ကိုင်ထားသည့် စည်းကမ်းဘောင်ထဲက ပြင်ဆင်ရေးကိုသာ အားလုံးက ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံကြရ မည်။
“၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ” ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍မူ အနှစ်သာရအရ သူတို့အကြား ကွဲလွဲမှုလုံးဝမရှိ၊ တစ်သွေး ထဲ၊ တစ်သံထဲ၊ တစ်မိန့်တည်းဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ပြောဆိုရာတွင်သုံးသည့် အပေါ်ယံစကားအသုံးအနှုန်းတွင်သာကွဲသည်။
“သမ္မတ” ဆိုသူက ကြောင်ချေးကဲ့သို့ ပျော့ပျော့နံနံပြောပြီး၊ “လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ” ဆိုသူက မျက်လှည့်ပြပြီးမြွေဆေးရောင်းသူ ဟန်ပန်နှင့် ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုပြောသည်။ “ကာချုပ်” ဆိုသူက လူမိုက်ဆန်ဆန်ပြောသည်။ “ အသက် ” တဲ့။ အသက်ဆိုတော့ အသက်ကို တော့လာ မထိနဲ့ မီးပွင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပင်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေသည် “ခေါင်းဆောင်များ၏ ဘက်ပေါင်းစုံက တွက်ဆမှုများဖြင့် ခိုင်ခိုင်မာမာရေးဆွဲထားသည့် ဥပဒေ” ဖြစ်သတဲ့။ “ ပြည်သူ ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်း” က ထောက်ခံခဲ့သတဲ့။
တစ်ချိန်က ဗိုလ်နေဝင်းစစ်အုပ်စု(မဆလ)အစိုးရကလည်း “၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေ”နှင့်ပတ်သက်၍ ၉၀ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင် နှုန်း ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည်ဟု ပြောခဲ့ဖူးသည်။ နောက်တော့ “၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေ” ဘယ်လို မရှုမလှဇာတ်သိမ်းသွားခဲ့ရသလဲ ဆိုသည်ကို သမ္မတ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကာချုပ်တို့ သတိရဖို့ကောင်းသည်။
“စစ်အုပ်စုက စစ်တပ်ကို ဂုပ်ခွစီးပြီး နိုင်ငံရေး/စီးပွားရေး လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်နေမှုများ” ကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားသုတ်သင်နိုင်ခြင်း မရှိ သမျှကာလပတ်လုံး ဒီမိုကရေစီအရေး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသည် မည်သို့မျှ/မည်သည့်အခါမျှ အာမခံချက်ရှိ လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ “စစ်အုပ်စုက စစ်တပ်ကို ဂုပ်ခွစီးပြီး နိုင်ငံရေး/စီးပွားရေး လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်နေသမျှ” ကာလပတ်လုံး အတုအယောင် ဒီမိုကရေစီ၊ အတုအယောင်ဖက်ဒရယ်၊ အတုအယောင်ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ဖြင့်သာ နှစ်သိမ့်နေကြရပေလိမ့်မည်။
တစ်ချိန်က “ဆိုရှယ်လစ်အတု” ဖြင့် ဆင်းရဲတွင်းသို့ ကျနော်တို့ပြည်သူများသက်ဆင်းခဲ့ကြရပြီး၊ ယခုအခါ “စည်းကမ်းပြည့်ဝ သောဒီမိုကရေစီသို့မဟုတ် အတုအယောင်ဒီမိုကရေစီ” ဖြင့်လည်း အိမ်နီး/အိမ်ဝေးနိုင်ငံများသို့ အိမ်ဖော်များ၊ အထွေထွေအလုပ်သမား များအဖြစ် ကျနော်တို့ပြည်သူများခရီးနှင်နေကြရပြီး၊ နက်ရှိုင်းသော ဆင်းရဲတွင်းထဲ နစ်သထက်နစ်ဝင်နေခဲ့ကြရပါပြီ။
“စစ်အုပ်စုနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်”သည် “ဆိုရှယ်လစ်အတု”မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ “ဒီမိုကရေစီအတု” မျက်နှာဖုံးစွပ် ထားသည်ဖြစ်စေ၊ အဆက်ဆက်သော အုပ်စိုးသူများနှင့် ၄င်းတို့၏ မိုက်ဖော်ဆိုးဖက် ခရိုနီများကို ချမ်းသာသည်ထက် ချမ်းသာကြွယ်ဝ စေခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူများကို မွဲပြာ ကျသည်ထက်ပို၍မွဲပြာကြစေခဲ့သောစနစ်ဆိုး၊ စနစ်ရိုင်းဖြစ်သည်ကို ပြည်သူများသည် ဖြတ် သန်းခဲ့ရသောအတွေ့အကြုံများအရ ခါးသည်း နာကျည်းစွာ သိရှိနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ၍ လွှတ်တော်တွင်း/လွှတ်တော်ပမှ “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ” ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပစ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသူကြသူများ၏ အဓိက ဦးတည်ချက်သည်လည်း စစ်အုပ်စုက “စစ်တပ်ကိုဂုပ်ခွစီးပြီး နိုင်ငံရေး/စီးပွားရေး လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်နေမှုများ ရှင်းလင်း ဖယ်ရှား သုတ်သင်ရေး” ဆိုသည့်အချက်ကို အဓိကထားပြီး တိတိကျကျ လုပ်ဆောင်ကြရပေလိမ့်မည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြစ်မြောက်အောင် အကောင်ထည်ဖော်ရာတွင်လည်း ပြည်သူလူထု၏စွမ်းအားကို ထိထိရောက်ရောက် စည်းရုံးအားကိုးသင့်လှပေသည်။
စစ်အုပ်စုနှင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တကိုယ်တော်အစွမ်းအစနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ တရား၊ဓမ္မသက်သက်နှင့် သော်လည်း ကောင်းဖြောင့်ဖျနားချ၊သိမ်းသွင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လူဆိုးလူမိုက်များအတွက် အကျဉ်းထောင်နှင့်ကြိုးစင် လိုအပ်သကဲ့သို့ စစ်အုပ်စု နှင့်စစ်အာဏာရှင်များအတွက်လည်း ပြည်သူလူထုစွမ်းအားနှင့်ဖိအားပေးအကြပ်ကိုင်ဖို့လည်း မုချလိုအပ်ပါသည်။
တချိန်က ရုပ်သံ၊ ရေဒီယို၊ သတင်းစာ စာမျက်နှာများတွင် “မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒီတွေ တိုင်းပြည်ပျက်အောင် လုပ်နေသည်”၊ “BBC ညာနေသည်”၊ “VOA လိမ်နေသည်”၊ “RFA ရန်တိုက်ပေးနေသည်” ဆိုသည့် ဆိုသည့် အသံတွေ မကြားချင်အဆုံး/ မမြင်ချင် အဆုံးကြားခဲ့/မြင်ခဲ့/ ဖတ်ခဲ့ကြရသည်။
အခုတော့ ဗိုလ်သိန်းစိန်၊ ဗိုလ်ရွှေမန်း၊ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်တို့သည် VOA မှတဆင့် လိမ်ညာနေကြလေပြီ။ ဗိုလ်သိန်းစိန်၊ ဗိုလ်ရွှေမန်း၊ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်တို့၏ မုသာဝါဒများ၊ င့ါစကားနွားရများကို VOA မှတဆင့်ထုတ်လွှင့်နေလေပြီ။
(Photo Credit – မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာဟောင်း၊ ဟိုတချိန်က သတင်းစာ၏ ကြွေးကြော်သံ)
2 Responses to တူမောင်ညို – VOA မှ တဆင့် သူတို့ လိမ်ညာနေကြပြီ
kaung myat min on November 25, 2014 at 12:40 pm
အဲလို ဖြစ်​ ​အောင်​ လည်းဌာနမှုး သန်း လွင်​ ထွန်း ဆို သူ က. သူ့ ရဲ့ ​ဖော်​ လန်​ ဖ်ား ​လေ သံ နဲ့ ​ပြော တာ.
ဟို အရင်​ ရို ဟင်​ ဂျာ ကိ စ္စ ကို က နဦး မီး ​မွှေး တဲ့ inter view. US က bengali ကို ကြီး ကြွး ကျယ်​ ကျယ်​ interview စ လုပ်​ တာ လည်း သူ ဘဲ.​ပြော ပြ တာ ပါ. Not personal.
စာ ​ရေး ဆရာ ခိုင်း နှိုင်း ​ပြော တာ ဟုတ်​ တယ်​ . သ ​ဘော တ ထပ်​ တည်း
Myo Chit on November 28, 2014 at 2:18 am